फ्राइड डोनट्स - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
खाजा53 मिनेट30 व्यक्ति
मेरो शहरमा, फ्राइड डोनट्स सामान्य हो Lent र ईस्टर। मेरी आमाले तिनीहरूलाई सँधै डोलोरेस शुक्रबारमा बनाउनुभएको थियो, जुन उहाँकी सेन्ट हुनुहुन्छ।
मसँग थर्मोमिक्स भएकोले मैले उसलाई सोच्न समेत भनेको छैन घुँडा र आटा तयार गर्न, म यसको ख्याल राख्छु। र बाटोमा, निस्सन्देह, म पहिले नै तिनीहरूलाई चिसो।
हरेक चोटि मaलिएर घर आउँछु प्लेट डोनट्सले भरिएको छ उसले मलाई उही कुरा बताउँदछ, तर तपाईं आफैंलाई त्यो जागिर किन दिनुहुन्छ?, र मलाई लाग्छ "काम? ..."। यदि उनीहरूले आफैंलाई आफैंले बनाएका भए !!!! "
1 फ्राइड डोनट्स
इस्टरको सबैभन्दा विशिष्ट स्वादहरू यस जस्तो व्यंजनहरूसँग हाम्रो घरको बाढी आउँछ।
तयारी समय: 50M
खाना पकाउने समय: 3M
कुल समय: 53M
१/२ सुन्तलाको बोक्रा
G 150 ग्राम जैतुनको तेल
पेस्ट्री आटा को १ g० ग्राम
रासायनिक खमीरको १ पाउलो
चिनी र दालचिनी
गिलासमा राख्नुहोस्, चिनी र प्रोग्रामि pul पल्भराइज गर्नुहोस् १० सेकेन्ड, प्रगतिशील गति -30-१०
सुन्तला र निम्बूको बोक्रा थप्नुहोस्। कार्यक्रम १० सेकेन्ड, प्रगतिशील गति -30-१०। Spatula संग अवशेषहरू कम गर्नुहोस्।
अण्डाहरू, सुन्तला को रस र तेल जोड्नुहोस्। तालिका Seconds० सेकेन्ड, गति 20।
पीठो, खमीर र नुन थप्नुहोस्। कार्यक्रम १ मिनेट, गिलास बन्द, स्पाइक गति।
पिठोमा पिठो हाल्नुहोस् र यसलाई प्लास्टिकको र्‍यापले ढाकिएको २० मिनेटसम्म आराम गर्न दिनुहोस्।
तेलमा आफ्ना औंलाहरू डुबाई दिनुहोस्, र बल्टहरू اخारटको आकार बनाउनुहोस्। डोनट्स गठन गर्न तपाईंको औंलाको साथ केन्द्रमा थिच्नुहोस्।
तातो तेलमा फ्राई गर्नुहोस्, शोषक कागजमा निकाल्नुहोस्, र चिनी र दालचिनीमा छर्कनुहोस्।
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सजिलो, सामान्य, १ घण्टा भन्दा कम, Postres, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु, इस्टर रेसिपीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » सजिलो » फ्राइड डोनट्स
अना Zarza Vazquez भन्यो
कुन तेलमा तपाईं जैतुन वा सूर्यमुखी फ्राउ गर्नुहुन्छ? मलाई तपाईंको नुस्खा साँच्चिकै मनपर्‍यो।
Ana Zarza Vazquez लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार आना, म यसलाई जैतूनको तेलमा गर्छु, तर मैले त्यसलाई राखेको छैन, किनभने स्वाद, र मूल्यबाट त्यो पहिले नै प्रत्येकको छनौट हो।
मलाई तपाईंको सबै व्यंजनहरू मनपर्दछ, मसँग साथी छ जो मधुमेह रोगी हो र हरेक चोटि हामी सँगै भेला हुँदा कपाल तान्छ, किनभने ऊ कहिले मिष्ठान्न खान सक्दैन, के तपाईंसँग मधुमेह रोगी वा केकहरूको लागि मिठाई बनाउने विधि छ, म कसरी व्यञ्जनहरू अनुकूल पार्न सक्छु त्यो खान सक्छ। धेरै धेरै धन्यवाद
Desiree लाई जवाफ दिनुहोस्
होल डिजाइर, र त्यहाँ भएकोमा धन्यवाद। दृष्टि तपाईं मिठाईको लागि चिनी को बदली द्वारा व्यंजनहरु अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ, बराबर प्याकेजि in मा आउँछ। र यो डोनट्स को, त्यसपछि तिनीहरूलाई कभर नगर्नुहोस् वा केवल थोरै दालचिनीको साथ।
धेरै धेरै धन्यवाद, के यो एक विशेष मिठाई हुनु पर्छ?
कुनै डिजाइरी, यो विशेष रूपमा कोही पनि हुनुपर्दैन। यो स्वादको कुरा हो।
नमस्ते, तपाईलाई कस्तो छ? सत्य यो हो कि मैले उनीहरूको बारेमा १० पटक नै गरेको छु र म सूर्यफूलको तेलमा अधिक सिफारिस गर्छु किनकि जैतुनको तेलमा तेलको स्वाद अधिक हुन्छ। अति धनी, म तिमीलाई तिनीहरूलाई सल्लाह दिन सल्लाह दिन्छु।
युरेनालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते युरेना, त्यसैले मैले कुनै पनि प्रकारको तेल तोकेको छैन किनकि यो प्रत्येक एकको स्वादमा निर्भर गर्दछ ...
नमस्कार सद्गुणाहरू, म तपाईंको ब्लग अनुसरण गर्दछु, म प्रत्येक दिन यसलाई हेर्छु र तपाईं मलाई हाम्रो दैनिक खानाको बारेमा धेरै विचारहरू दिनुहुन्छ। म तपाईंलाई तपाईंको प्रयासको लागि अनुग्रह दिन चाहन्छु। तपाईं ठूलो काम गर्नुहुन्छ। मेरो प्रश्नको आजको दिनको कुनै सम्बन्ध छैन। नुस्खा।मलाई चामलको केक बनाउन चाहान्छु। किनभने हामी मितिमा छौ कि मलाई थाहा छैन बम्बा भात भनेको के हो? यो कुनै चामलको साथ बनाउन सकिन्छ? के मात्रा र समय परिवर्तन हुन्छ? मेरो चुम्बन हेरचाहको लागि धन्यवाद
नमस्ते क्लाउडिया, बमबा चावल चामलको एक प्रकार हो, म यसलाई चावलको केकको लागि दूधको साथ सिफारिश गर्दछु किनकि यो धेरै राम्रो छ। यदि तपाईंले पहिले चामलको हलवा बनाउनुभएको छ भने, चामलको प्रकार प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईं सामान्य रूपमा यसलाई बनाउनुहुन्छ। y त्यो चामलको लागि मान र समय प्रयोग गर्नुहोस्। रकम उस्तै हो।
हिजो कत्ति संयोग थियो मेरी सासुले डोनट्सको लागि नुस्खा के हो भनेर हामीलाई प्रश्न गरिरहनुभयो, र हेर्नुहोस् आज म थर्मोरसेटासको ब्लगमा कहाँ पुग्छु र त्यहाँ छ, तपाईं महान xicas हुनुहुन्छ। त्यहाँ भएकोमा धन्यवाद। 🙂
नमस्ते भेरोनिका, मैले यस तथ्यलाई फाइदा उठाए कि हामी इस्टर सुरु गर्दै थियौं, ती दिनहरू प्रकाशित गर्न जुन हिट हुन्छ, केहि दिनमा दुध टोरिजास ... यदि हामीसँग टेलिपेथी छ भने।
मैले भर्खर तिनीहरूलाई बनाएँ र ती स्वादिष्ट छन् !!! निस्सन्देह, आटा थर्मोमिक्समा यति अडी रहन्छ कि यसले मलाई यसलाई सफा गर्नमा थोरै काम खर्च गरेको छ ... तर यो थप रेसिपीहरूको लागि नयाँ पर्खाइ जस्तै हो !!!! धेरै धेरै धन्यवाद
हेलो ओल्गा, जब तपाईले देख्नुहुन्छ कि यस प्रकारको पिठो एकदम चिप्लिएको छ, थोरै पीठो थपेमा तपाईले देख्नुहुनेछ कि यो राम्रो छ ... कि यदि ओभरबोर्ड नगरीकन, यो पनि धेरै सुक्खा हुने छैन ...
नमस्कार सद्गुणहरू, हिजो मैले उत्साहित भएर चामलको हलवा केक बनाएँ, यस्तो लाग्थ्यो कि यो तरल पदार्थ नै रहेछ तर आज बिहान मैले यसलाई हेर्दा यो एकदमै राम्रो पिन्ट (लगभग तपाईंको फोटोको जस्तै हो) द्वारा घुमाएको थियो धन्यवाद। तपाईं सबै कुराको लागि धेरै
त्यहाँ टेलिपेथीको अर्को केस देखिन्छ! हिजो हिजो मैले डोनट नुस्खा खोज्ने बारेमा सोचेँ र यो यहाँ छ! धन्यवाद; म तुरुन्त काममा तल झर्छ र म तिमीलाई यसको बारेमा भन्नेछु। चुम्बनहरू
हेलो भर्तीहरू यस प्राप्त गर्न धेरै राम्रो अपिन्टा छ। म मेरो आमा र मेरी बहिनीलाई बनाउनेछु, जुन धेरै स्वादिष्ट हुन्छ। एक शुभकामना।
नमस्कार इसाबेल, जब तपाईं हामीलाई भन्नुहोस् ...
राम्रो शोक ……। कति धनी !!! उनीहरू अझै किचनबाट बाहिर आएनन् कि उनीहरूलाई प्रयास गर्नुहोस् र मैले पहिले नै दुई खाना खाइसकेको छु! धेरै सजिलो र महान। निस्सन्देह, उनीहरूले टिप्पणी गरे जस्तै आटा थर्मोमिक्समा टाँसिएको छ तर यो टर्बोको केही जोडीले राम्रोसँग सफा गरिन्छ। अभिवादन र बधाई छ।
जब मैले उनीहरूलाई मेरो श्रीमान्लाई प्रयास गर्न दिएँ, उनले स्वाद धेरै मनपराए, तर यो सत्य हो कि तिनीहरू एकदम कडा थिएनन्, हामीले किनेको जस्तै, तिनीहरू फुल्फिएर थिए, र तिनीहरू सजिलै भाँच्दछन्। तिनीहरू यस जस्तै हुनुपर्दछ वा म तयार गर्नमा त्रुटि पाउन सक्छु? हुनसक्छ आगोलाई कम राख्नुहोस् र तिनीहरूसँग लामो समय छ?
नमस्ते भेरोनिका, तिनीहरू नरम छन्, तिनीहरू डोनट होइनन्, तिनीहरू तपाईले जस्तो वर्णन गर्नुहुन्छ, तर तिनीहरू सामान्य भन्दा नरम बाहिर आउन सक्थे, किनभने पीठोको ब्रान्डको कारण वा मैले तपाईंलाई अलि बढी पीठो मागेको भए, तर के भने धेरै शान्त छ ...
नमस्कार, यो पहिलो पटक हो कि मैले डोनट बनाउँछु र सत्य यो हो कि तिनीहरू महान बाहिर आए, तिनीहरू उडिए
मर्सिडीजलाई जवाफ दिनुहोस्
कस्तो अचम्मको मर्सिडीज! हामी धेरै खुसी छौं, यो जान्न पाउँदा हाम्रो लागि सन्तोषको कुरा हो कि नुस्खा राम्रोसँग बाहिर आयो। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
यी डोनट्स महान हो !!!! मैले भर्खरै एक यस्तो नुस्खा फेला पारेन जुन टेंडर बाहिर आयो, तिनीहरूले मलाई थर्मोमिक्सको साथ यस बारे बताएका थिए, र बनाउन सजिलो, छिटो र कोमल हुनुको साथै तपाईं केको लागि अरू केहि सोध्न सक्नुहुन्छ !! यो बचत गरिएको छ, अर्को पटकको लागि, किनकि अब यदि तपाईं केहि बेरमा केही डोनटहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने, परिणाम थाहा पाएर। धेरै धेरै धन्यवाद।
MAR लाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यबाद मर्न तिनीहरूलाई बनाउन को लागी! सत्य यो हो कि Thermomix को साथ यो डोनट्स बनाउन धेरै सहज छ, र अधिक तिनीहरू यति धनी बाहिर आए भने, सही? हामी धेरै खुसी छौं कि तपाईंले तिनीहरूलाई मन पराउनुभयो। भेटौला!
मैले डोनट्स बनाएको छु तर उनीहरू निकै कठिन बाहिर आए। मैले गॅलो पेस्ट्रीको पीठो प्रयोग गरेको छु र मैले तिनीहरूलाई सूर्यमुखी तेलमा भुटेको छु; यस संग यसको केहि गर्न छ ???
यस ब्लग को लागी धेरै धन्यबाद
आना, म कति दु: खी छु, यो अनौंठो छ, किनकि यो विपरित हो, तिनीहरू बरु नरम छन्। मलाई लाग्दैन कि यो पीठोको ब्रान्ड हो, तपाईंले गिलासको पीठो पीठोमा लिनको निम्ति तपाईंले पिठो थप्नुभयो?
नमस्कार अना बेलन,
के तपाईंले खमीर राख्नु भएको छ? यसले उनीहरूलाई फुलाउने छ।
यो के जस्तो देखिन्छ! धेरै बाहिर आउँछन्, तिनीहरू स्थिर गर्न सकिन्छ? धन्यवाद र सादर
प्रकोप! म तिनीहरूलाई भ्राउने बेलामा खारेज गरिएको छ मलाई थाहा भएन मलाई के हुन सक्दछ, म भान्साकोठामा एउटा विपत्ति हुँ, थर्मोमिक्सको कुरा पनि बाहिर आउँदैन, म यो भव्य ब्लगको साथ प्रयास गर्दैछु, बधाई
के तपाईंले नुस्खा दोहोर्याउन कोशिश गर्नुभयो? ... र निराश नहुनुहोस् कि यो हामी सबैलाई भएको छ !!
म धेरै राम्रो भएको छु !!!!!!!! एक धेरै सजिलो र द्रुत नुस्खा हो, त्यसैले यसलाई सिर्जना गर्न पाउँदा खुशीको कुरा हो। म आफ्ना साथीहरू, मेरा छोरा छोरीहरू र मेरो श्रीमान्को लागि यो प्रयास गर्नका लागि चाँडै नै नुस्खा दोहोर्‍याउने छु, उनीहरूले कुनै पनि छाड्दैनन। यति सरल छ कि यसलाई राख्न अल्छी छैन। ।
यस नुस्खा को लागी धेरै धन्यवाद म यो लामो समय देखि खोज्दैछु।
तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यबाद तपाइँ मलाई गर्न को लागी बनाउनु भयो उनीहरुलाई !!
धेरै राम्रो, तिनीहरू धेरै राम्रो थिए, धन्यबाद
पाइनलाई जवाफ दिनुहोस्
कति राम्रो पिनो !!!
हामीलाई मन पर्छ कि व्यंजनहरू राम्रोसँग बाहिर आउँदछन्।
बीट्रिज vf भन्यो
नमस्कार सद्गुणहरू, मैले तपाईंको नुस्खा बनाएको छु र यो निकै कोमल र धनी बाहिर आयो, मैले मात्र छोडेको छु अलि अलि कच्चा। .. मैले तिनीहरूलाई बाहिर निकाल्नु परेको थियो किनकि तिनीहरू जलाइ रहेका थिए र यदि म तिनीहरूमा नरम आगो हाल्छु भने, तिनीहरू भाँचिनेछन्, यो हुन सक्छ? धन्यबाद
Beitraz vf लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले आगोलाई मध्यम तापक्रममा राखें, र मैले तिनीहरूलाई खैरो देख्ने बित्तिकै, म तिनीहरूलाई फर्काउँछु। तपाईं उनीहरूको बारेमा धेरै सचेत हुनुपर्दछ किनकि, तपाईंले अलिकता गुमाए पछि, तिनीहरू धेरै खैरो 😉
म आटा बाहिर आएँ कि म डनट पनि बनाउन सक्दिन, यदि यो गम हो ... यो हुन सक्छ किनकि मैले दुई पटक प्रेम गरें?
नमस्ते लोला, सायद तपाईलाई अलि बढी पिठो चाहिन्छ ... हरेक ब्रान्ड फरक छ र बढी वा कम तरल पदार्थ लिन सक्दछ ... यसले आटामा काम गर्न र डोनट्स बनाउनका लागि तपाईंको हातमा अलि तेल लगाउन सहयोग गर्दछ। यो दुई पटक घुँडाईएको लागि छैन ...
पास्ता र Pesto